Ara-dalàna tanteraka ny fangatahan` ny ministera hoy ny teo anivon`ny HCC ka tsy maintsy hirosoana ny fanovana sy ny fandaminana rehetra tsy maintsy apetraka manolona ny fitantanana izany, hoy Francis Razafiarison, tale jeneralin` ny kolotsaina eo anivon` ny ministeran` ny serasera sy ny kolotsaina. Ny rafitra entina hitantana ny sehatry ny horonantsary no tsy maintsy ovàna ireo endrika sy tsy fahatomombanana nisy teo amin`ny OMACI (ofisim-pirenena misahana ny sarimihetsika). Isan` ny toe-draharaha mitàna ny sain` ireo mpikatroka ao anatin` ny tontolon` ny sarimihetsika tamin` ny volana aprily ny raharaha mahakasika ny OMACI kanefa maro ireo toe-javatra tsy nifanaraka tamin` ny lalàna sy tamin` ny tokony ho izy tamin` ny fitantanana ity sampandraharaha ity hatramin` izay. Ka izany indrindra, hoy ny tale jeneralin` ny kolontsaina, no tsy maintsy nojeren` ny ministera manokana ny hanamboarana volavolan-dalàna manitsy ny fomba hitantanana izany. Na dia eo aza ny olana samihafa nisy teo anivon` ny OMACI dia nipetraka hatrany ny fiarahamiasa teo amin` ny ministera sy ireo mpisehatra ao anatin` izay tontolon` ny sarimihetsika izay hatramin` izao. Tsiahivina fa maro ireo fanakianana mahakasika io raharaha io ary isan` izany ny tambazotra miaro ny zon` ny mpanfifa izay nilaza fa resa-bola io raharaha OMACI io ary mampidi-bola tokoa ho an` ny fanjakana. Marihana fa hisokatra ny zoma 19 jolay ho avy izao ny sinema Canal Olympia etsy Andohatapenaka ka asa raha hisy hifandraisany.